Ufune uju - iHielscher Ultrasound Technology
Imiphumela yokusesha ye: uju ("honey")
I-Ultrasonication izindlela ezingezona ezishisayo zokushisa uju. Ukusebenza ngoju lwe-Ultrasonic kusetshenziselwa ngempumelelo ukwenza ama-virus angenasici, ukunciphisa izinhlayiya, ukuphula amakristalu akhona futhi kuvimbele ukukhohlakala okuqhubekayo ngoju. Njengoba i-sonication iyindlela yokwelapha emnene, engenawo amandla okushisa, ukwakheka kwezakhi ezingafuneki njenge-5-Hydroxymethylfurfural (5-HMF), evela lapho uju luphethwe ngokwelashwa. I-Hielscher Ultrasonics inikezela ngezinhlelo eziphezulu zokwenza okuphezulu kwe-ultrasound namaseli okugeleza ukuze kukhiqizwe uju osezingeni eliphezulu.
Kutholwe amahithi angu-13. 12 ziyakhonjiswa: